Himalaya Dainik » पूर्वपत्नीविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने मनोज गजुरेलको तयारी
वरिष्ठ हास्यव्यंग्य कलाकार मनोज गजुरेलले तीन वर्षअघि डि-भोर्स भएपछि पनि पूर्वश्रीमतीबाट गा-ली–बेइज्जती गर्ने क्रम नरोकिएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्वश्रीमतीका क्रियाकलापले आफ्नो चरित्रह-त्या भएको र आफ्ना दुई छोराछोरीहरूलाई समेत असर पुर्‍याएको उनको गुनासो छ ।
मनोर गजुरेल र उनकी पत्नी मिना ढकालबीच तीन वर्षअघि सम्बन्ध-विच्छेद भएको होे । पूर्वपत्नी मिनाले डिभोर्सयता लगातार मनोजमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाएर युट्युव च्यानलहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै आएकी छन् । मनोज भने हालसम्म मौन थिए । हालै मनोजले अर्को विवाह गर्न लागेको सार्वजनिक भएपछि मिनाले फेरि उनीमाथि विभिन्न आरोप लगाएकी छन् ।
फिल्म ‘चिसो मान्छे’ को लागि स्वस्तिमाले लिइन् अहिलेसम्मकै मँहगो पारिश्रमिक
१९ बर्षे युवती एन्जेलिना जोली बन्न खोज्दा…
के बिवाह गर्दै छिन् वर्षा, को हुन उनको प्रेमी ?
नयाँ चालक अनुमतिपत्र कहिले खुल्छ ? यस्तो छ पछिल्लो सूचना